सम्पादकीय::Nepali News Portal from Nepal
दशगजामा खसेका आँसुले पोल्छ !
यतिबेला नेपालको सीमा क्षेत्रमा करिब १५ सय नेपाली अलपत्र छन् । भारतका विभिन्न क्षेत्रमा ज्याला मजदूरी गर्ने उनीहरु भारतमा फैलिएको कोरोना संक्रमणसँगै रोजगारी खोसिएपछि स्वदेश फर्कँदा सीमामै रोकिएपछि अलपत्र बनेका हुन् । कोरोना भाइरसबाट...
पारदर्शी र व्यवस्थित बनोस्, राहत बितरण
सरकारले ढिलै भए पनि कोरोना संक्रमणको गाम्भीर्यता र उत्पन्न विषम परिस्थितिबारे सजगता अपनाएको छ । लकडाउनको समयावधि बढाइएको छ । नागरिक र खासगरि दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर खानेहरुको समस्या सल्टाउन राहत प्याकेजको घोषणा गरेको...
प्रकृति र मानव सभ्यता
यतिबेला विश्वभरका प्राय सबैदेश लकडाउनको अबस्थामा छन् । हरेक देशले कोरोना भाइरस बिरुद्ध आफ्नो अन्तिम युद्द लडिरहेको छ । यस अघि भएका दुइवटा विश्व युद्धमा संसार दुइ ध्रुबमा बाँडिएको थियो । उनीहरु एकले अर्कालाई...
राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर
सरकारले लकडाउनको समयावधि बढाएसँगै विभिन्न राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि लकडाउन बढाउनुको विकल्प थिएन । आवश्यक परे अझै बढाउनुपर्छ । लकडाउन बढेसँगै आम नागरिकको दैनिकी मात्रै हैन, देशको अर्थतन्त्र...
संक्रमितप्रति मानवीय व्यवहार गरौँ
कोरोना भाइरस ( कोभिड –१९) ले विश्वजस्तै नेपाललाई पनि गाँजेको छ । एकपछि अर्को गर्दै कोराना संक्रमणका नयाँ घटनाहरु सार्वजनिक हुँदै गएका छन् । यसले आम नागरिकमा संन्त्रास पैदा मात्र गरेको छैन,राज्यको तयारीप्रति पनि...
विपत्तिले बाजा बजायो, अब त जागौँ !
बागलुङकी एक युवतीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ । बेल्जियमबाट आएकी उनीमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टिसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ५ जना पुगेको छ । ती महिला बेल्जियमबाट कतार हुँदै नेपाल आएकी थिइन् । कतार...
अल्झेँ कहिँ त के भो ? बाटो भुलेको छैन !
हामी संकटमा छौँ, विश्व संकटमा छ अनि मानवीयतामाथि कोभिड–१९ को पेचिलो आक्रमण छ । सिंगो विश्व संक्रमणको चपेटामा पर्दा नेपाल कसरी पो अछुतो रहन्थ्यो र ? पर्याप्त तयार र सावधानीविना कोरोनाविरुद्धको युद्धमा होमिन हामी...
लक डाउनको पूर्ण पालना गरौँ
सरकारले एकहप्ता देशलाई बन्द अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरस ( कोभिड –१९) को संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउन तथा यसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले यो निर्णय गरेको हो । कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा...
झारा टार्ने परम्परा त्यागौ
संसारभर महामारीको रुप धारण गरिरहेको कोरोना भाइरस (कोभीड–१९)का कारण नेपाल पनि आक्रान्त छ । केही दिन यता नेपाल सरकारले साबधानीका लागि भन्दै अन्तराष्ट्रिय उडानदेखि सिमा नाका बन्द गर्ने कामहरु क्रमैसँग गरिरहेको छ । सोमबार...
‘लक डाउन’को लागि तयार हौँ
नेपाल सरकारले नेपाल र चीनतर्फबा सबै सीमा नाका एकहप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो निर्यय गरेसँगै अब ती सीमामा आवतजावत बन्द हुनेछ । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम रोक्न...